Fiteny malaiô-pôlineziana afovoany-atsinanana - Wikipedia
I Wallacea dia vondron' ireo nosy ao anatin' ny faritra mena. Ny Weber Line dia miloko manga. Ny fiteny malaiô-pôlineziana afovoany dia saika ao anatin' i Wallacea irery ihany. Ny vondrona fiteny hafa ao amin' i Wallacea dia ahitana ny fiteny halmahera avaratra, ny fiteny selebika ary ny fiteny solaoesy atsimo.
Ny fiteny malaiô-pôlineziana afovoany-atsinanana dia sampan' ny fiteny malaiô-pôlineziana ahitana fiteny 700 mahery.
Fitsinjaràny[hanova | hanova ny fango]
Ny fiteny malaiô-pôlineziana afovoany dia ampiasaina any amin' ny Nosy Sunda Kely sy Maluku ao amin' ny Ranomasin' i Banda, any amin' ny faritra mifanitsy amin' ny faritany indôneziana any Nusa Tenggara Atsinanana sy Maluku ary ny firenena Timor Atsinanana (afa-tsy ny fiteny papoana ao Timor sy ny manodidina), fa miaraka amin' ny fiteny bima miitatra hatrany amin' ny tapany atsinanan' ny Nosy Sumbawa ao amin' ny faritanin' i Nusa Tenggara Andrefana sy ny fiteny sola ao amin' ny Nosy Sula any amin' ny zoro atsimo-andrefan' ny faritanin' i Maluku Avaratra. Ny nosy lehibe indrindra amin’ io faritra io dia i Sumbawa, i Sumba, i Flores, i Timor, i Buru, ary i Seram. Ny fiteny manan-danja indrindra amin' ny isa dia ny fiteny ngahy mbojo (fiteny bimana), ny fiteny fangaray any andrefan' i Flores, ny fiteny oabo meto any Timor Andrefana, ary ny fiteny tetoma izay fitenim-pirenen' i Timor Atsinanana.
Zana-tsampana[hanova | hanova ny fango]
Ao amin' ny tolo-kevitra voalohany, ny fiteny malaiô-pôlineziana afovoany-atsinanana dia mizara ho fiteny malaiô-pôlineziana afovoany sy fiteny malaiô-pôlineziana atsinanana. Na izany aza, ny fiteny malaiô-pôlineziana afovoany dia fantatra amin' ny ankapobeny ho teny mahafaoka ireo fiteny tsy malaiô-pôlineziana atsinanana ao anatin' ny fiteny malaiô-pôlineziana afovoany-atsinanana, izay mamorona fatorana fa tsy zana-tsampana manan-kery.
Ny fiteny malaiô-pôlineziana afovoany dia mety mamorona fatoranana. Ny ankamaroany dia tsy voaporofo tsara, saingy toa tsy mahaforona vondrona mirindra. Maro amin' ireo endri-toetra aroso hamaritana ny fiteny malaiô-pôlineziana afovoany no tsy hita any amin' ny faran' ny faritra ara-jeôgrafia. Noho izany, ny mpahay teny sasany dia mihevitra azy io ho fatorana; ny fanasokajiana mahazatra dia mety hihevitra ny fiteny malaiô-pôlineziana afovoany ho teny mety anondroana ireo fiteny afovoany-atsinanana izay tsy malaiô-pôlineziana atsinanana (Grimes 1991).
Ny faritra itenenanana ny fiteny malaiô-pôlineziana atsinanana dia manomboka amin' ny morontsirak' i Halmahera mamakivaky an' i Pasifika. Mbola mampiady hevitra ity zana-bondrona ity satria mifototra amin' ny porofo ara-boambolana fotsiny, tsy misy fanavaozana ara-peon-teny iombonana. Mifanohitra amin' izany kosa ireo sampana roa, dia ny fiteny halmahera amin' ny tapany atsimon' i Ginea Vaovao Andrefana sy ny fiteny ôseanika, izay samy voafaritra tsara amin' ny fanavaozana ara-peon-teny sy ara-boambolana, ary ekena eran' izao tontolo izao ho zana-bondrona manan-kery.
Ny fiheverana ny fiteny malaiô-pôlineziana afovoany-atsinanana ho vondrona (clade) manan-kery dia nolavin' i Donohue & Grimes (2008), izay tsy mihevitra ny fiteny malaiô-pôlineziana afovoany-atsinanana ho fatorana. Donohue & Grimes (2008) dia milaza fa maro ireo endri-javatra voalaza fa mamaritra ny fiteny malaiô-pôlineziana afovoany na ny fiteny malaiô-pôlineziana afovoany-atsinanana izay hita ihany koa amin' ny sasany amin' ireo fiteny malaiô-pôlineziana andrefana mihazona ny fomba tranainy kokoa ary na amin' ny fiteny fôrmôzana aza. Edwards & Grimes (2021) koa dia tsy mihevitra ny fiteny malaiô-pôlineziana afovoany-atsinanana ho sampana mirindra.
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/w/index.php?title=Fiteny_malaiô-pôlineziana_afovoany-atsinanana&oldid=1045648"
Voaova farany tamin'ny 9 Jiona 2022 amin'ny 11:48 ity pejy ity.